jQuery ဆိုတာဘာလဲ - What is jQuery? Explained detail. - နည်းပညာ
Myanmar Web Designer Contact Form စာမျက်နှာကို သွားပါ။ ကွက်လပ်တွေထဲမှာ ဘာမှမဖြည့်ပဲ Send ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေ ဖြည့်ဖို့ ကျန်နေသေးကြောင်း alter box (သတိပေး box) လေး တက်လာပါမယ်။ အဲလို စစ်ဆေးတာကို form validate လုပ်တာလို့ ခေါ်ပါတယ်။
– Slider ဆိုတာ မသိရင်တော့ Singapore SEO Service ကို သွားကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာ ပုံတွေ တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံ မှိန်ပြီးပျောက်သွားလိုက် ပြန်ပေါ်လာလိုက် ဖြစ်နေတာ image slider ပါပဲ၊ Myanmar Web Designer မှာလည်း ကြည့်လို့ရပါတယ်။ သူကတော့ တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံ ဘေးဘက်ကို ဝင်ဝင်သွားတာ တွေ့ရမှာပါ၊ slider တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုတော့ effect ချင်းမတူပါဘူး။
← ဝဘ်ဆိုက် အခြေခံ ဗဟုသုတ – Basic Website Knowledge jQuery ဖြင့် ဖျောက်နည်း – jQuery .hide() function →
2 thoughts on “jQuery ဆိုတာဘာလဲ – What is jQuery? Explained detail.”